Fialan-tsasatra iraisam-pirenena amin'ny Travel Travel India - Call 91-993.702.7574
Fialan-tsasatra Fiambenana Andro Iraisam-pirenena Ho An'ny Indizena, Toy izany koa ny Indiana Tours
India dia tanimboly sy mystika feno tantaran'ny fivavahana sy kolontsaina, hatsaran-tarehy mahatalanjona voajanahary, zava-mahatalanjona mirakitra fahagola fahiny, ary fiaraha-monina maoderina ankehitriny. Ny mpitsidika manerana izao tontolo izao dia mijery any India mba hahita ny hatsarany sy ny tantara tokana. Na ny fivahinianana ara-pivavahana, ny fisehoana ara-boajanahary tsy manam-paharoa, na ny fitsangatsanganana ao amin'ny kolontsaina sy ny tantaran'ity firenena mahagaga ity, ny mpitsidika sy ny mpitsoa-ponenana dia mahazo antoka fa tena mahafaly ny dia ataon'izy ireo amin'ny fiaraha-mientana Sand Pebbles Tours.
Sand Pebbles Tours dia iray amin'ireo masoivohom-pitsangatsanganana manankarena indrindra any India izay manome fanatanjahantena fialantsasatra miavaka sy ireo fitsidihan'i India malaza manerana ny firenena sy ny faritra amin'ity firenena mahagaga ity. Ny sampan-draharahan'ny fitsangatsanganana manana traikefa matihanina sy nahazo mari-pankasitrahana dia manome karazana fitsangatsanganana izay mandinika ny faritra maro samihafa ao amin'ny firenena, ka ny maro amin'izy ireo dia manasongadina singa na toerana sasany ho an'ireo olona manana tombontsoa manokana ao amin'ireny faritra ireny.
Avy ao amin'ny toeram-ponenan'ny ala bitika Bhitarkanika amin'ny fitsangantsanganana amin'ny sambo sy fiompiana fialambolan-tany, ny sampana matihanina manana traikefa mahaliana dia afaka mifanena amin'ny faniriana sy ny tombontsoan'ny mpandeha rehetra. Mifidiana avy amin'ireto fampiantranoana mahatalanjona manaraka ireto ho an'ny traikefa tena miavaka izay mandeha eny rehetra eny ao amin'ny firenena. Ny sasany amin'ireo masoivoho indrindra pandehanana malaza ahitana:
Fivandron'i Tours Shimla Manali
Goa fitsangatsanganana sy vakoka amin'ny fialan-tsasatra
Odisha mandeha irery
Fitsangatsanganana fitsangatsanganana Royal Rajasthan
Tsidiho ny fitsidihan'ny tribes
Ny mpitsabo Indiana indraindray no tena dinihin'ny faritra, arakaraka ny tombotsoan'ny vondrona. Ny faritanin'i India tsirairay dia manana kolontsaina, fomban-drazana, tantara ary hatsarana manokana izay manintona mpitsidika manerana izao tontolo izao. Sand Pebbles Tours dia manolotra sariohatra manokana ao India mba hijery ny faritany sy faritra maro eto amin'ity firenena mahagaga ity, ao anatin'izany:
Avaratr'i India - manolotra tanàna malaza sy toerana ara-pivavahana ho an'ireo tempoly fahiny, farihy mamiratra, ary riandrano mahafinaritra
East India - foiben'ny governemanta tranainy fahiny, East India manome sehatra manan-danja, tempoly tsy mahazatra, ary kirarinen tsy fantatra
India-Avaratra Andrefana - faritra faran'izay mibaribary sy faran'izay mistery miorina eo an-tampon'ny Tendrombohitra Himalaya
West India - Manankarena eo amin'ny tantara, ara-panahy ary kolontsaina, ny Indiana Andrefana dia mampiavaka ny hatsaran-tarehy voajanahary miaraka amin'ny kolontsain'ny kolontsaina sy foibe ara-pivavahana
South India - mampiseho ny hakanton'ny natiora sy ny tsangambato fahiny
Central India - tranon'ny toeram-ponenan'ny biby an-tanety maro, zaridainam-pirenena, foko, ary tranokala fivahinianana fahiny
Sand Pebbles Tours dia nanolo-tena hitarika ny valanjavaboary fialantsasatra tena marina sy mahafa-po indrindra ary fitsidihana manokana amin'ny toerana miavaka manerana an'i Inde. Tsy misy fomba tsara kokoa hivezivezena any ambanivohitra, hiditra ao amin'ny tantara sy ny kolontsain'ny faritra, ary hiaina ny hatsaran-tarehin'ity tany mahavariana ity fa tsy any amin'ny masoivoho mpizaha tany be mpitsidika indrindra.
Mividy Rentrices Luxury any Odisha
Mankalaza ny fotoam-pialan-tsasatra amin'i Raja ao Odisha miaraka amin'ny fihenam-bidy manokana avy amin'ny fasika Sand P Tour N Travels